Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, Alle ha u naxariistee Suldaan Maxamed Suldaan oo ku geeriyooday magaalada Hargaysa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo oo tacsi tiiraanyo leh u diray...
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, Alle ha u naxariistee Suldaan Maxamed Suldaan oo ku geeriyooday magaalada Hargaysa.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada, dhaqanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir Suldaan Cabdullaahi oo ku geeriyooday magaalada Hargaysa.
Qoraal ka soo baxay xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu tilmaamay in Marxuumku uu door muuqda kasoo qaatay dib u heshiisiinta, adkeynta wadajirka iyo dadaalladii dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed ayaa si gaar ah uga tacsiyeeyey Isimada iyo guud ahaan hoggaanka dhaqanka Somaliland, geerida ku timid Marxuumka oo ahaa Suldaankii Guud ee Somaliland.
Previous articleTaliska ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo faah faahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax is-miidaaminta ee saakay..
Next articleJubbaland oo shuruud adag ku xirtay ka qeyb galka doorashada Soomaaliya